Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Tontolon'ny soratra: Nodimandry i Dafy Noely - Gazety Taratra
Gazety Taratra, 4 Janoary 2021
Tontolon'ny soratra: Nodimandry i Dafy Noely
Nosoratan'i Hary Razafindrakoto, gazety Taratra, 4 Janoary 2021, pejy 10.
Nodimandry i Dafy Noely.
Misaona ny zavakanto malagasy. Nodimandry, ny zoma 1 janoary 2021 teo, ny mpanoratra Randrianjakanavalona Dafy Noely, rehefa nivahiny 59 taona teto an-tany. Na anisan'ny mpanoratra manana asa soratra kanto sy mavesa-danja aza izy, tao anatin'ny fanetrentena tanteraka ny nisalorany ilay solonanarana hoe: Dafy Noely Mpanoratsora-poana. Indroa nisesy (taona 2016 sy taona 2017) i Dafy Noely no voafidy ho Mpanoratry ny Taona, araka ny fifaninanana nampanaovin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (KHT). Ankoatra ny mpitsara avy ao anivon'ny KHT, anisan'ny nandray anjara tamin'ny fitsarana ihany koa ny olon-drehetra. Saika hita taratra ao amin'ny sanganasan'i Dafy Noely avokoa ny lohahevitra rehetra. Anisan'izany ny fitiavana (olon-droa, reny sy zanaka, tanindrazana …), ny trangam-piarahamonina, sns.
Anisan'ny nahafantarana an'i Dafy Noely ny fanehoan-kevitra nataony tamin'ny taona 2016 nandritra ny nanolorana azy ny samboadin'ny maha Mpanoratry ny taona azy. Mila omena lanja ny teny malagasy na eo aza ny frimorimon'ny teknolojia. Tsy olon-tokana fa fiaraha-mientana avy amin'ny tsirairay no takina … Fa raha sanatria mitohy izao, afaka 50 taona eo ho eo, ho rava tanteraka ny teny malagasy, hoy i Dafy Noely.
Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manontolo sy ny tontolon'ny soratra ary ny zavakanto malagasy ny Gazety Taratra.